धेरैपछि काठमाडौँमा भूकम्पको धक्का, केन्द्रबिन्दु धादिङ !
ARCHIVE » धेरैपछि काठमाडौँमा भूकम्पको धक्का, केन्द्रबिन्दु धादिङ !
काठमाडौँ- लामो समयपछि काठमाडौँमा भूकम्प गएको छ । बिहीबार बिहान ९ बजेर ५२ मिनेट जाँदा काठमाडौँमा भूकम्पको धक्का महसुस गरिएको हो । राष्ट्रिय भूकम्प प्रविधि मापन केन्द्रका अनुसार धादिङ केन्द्रबिन्दु बनाएर ५ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको हो । यो नयाँ भूकम्प नभइ २०७२ बैशाख १२ कै भूकम्पको परकम्प भएको केन्द्रले जनाएको छ ।
भूकम्पले काठमाडौँ उपत्यकासहित आसपासका जिल्लामा धक्का महसुस भएको छ । भूकम्प राष्ट्रिय मापन केन्द्रका अनुसार धादिङको सुनौलो बजारबाट ४.४ उत्तर पश्चिम केन्द्र बनाएर बिहान ९ बजेर ५२ मिनेट ४७ सेकेन्डमा भूकम्प गएको हो ।